Edinson Cavani safashadiisa ugu horreysay ee Kooxda Manchester United oo dib u dhacday & Sababta oo la ogaaday – Gool FM
(Manchester) 07 Okt 2020. Edinson Cavani ayaa safashiisa ugu horreysa ee kooxda Manchester United ay dib u dhacday isagoo wajahaya karaantiil.
Edinson Cavani waa inuu sugayaa inuu ciyaaro kulankiisa ugu horreeya ee kooxda Manchester United, kaddib markii lagu qasbay inuu iskiis isu go’doomiyo kaddib maalintii ugu dambeysay suuqa ee uu u dhaqaaqay garoonka Old Trafford.
33-sano jirkaan ayaa ka mid ahaa afar nin oo la keenay maalintii ugu dambeysay suuqa kala iibsiga garoonka Old Trafford, halkaasoo uu qalinka ugu duugay Man United heshiis hal sano ah oo uu kula joogayo.
Si kastaba ha noqotee, kaddib markii ay fasaxday Kooxda Paris Saint-Germain, weeraryahanka reer Uruguay waxa uu ku dhex noolaa guud ahaan dadweynaha Faransiiska halkii uu ku noolaan lahaa goobo aamin ah.
Sida ku cad tilmaamaha Dowladda UK, qof kasta oo yimaada UK kana yimaada Faransiiska waa inuu karantiil ahaadaa 14 maalmood, taas oo galin doonta Cavani inuu dib u dhigo kulankiisii ugu horreeyay ee kooxda Man Utd.
Hadda waa inuu kaligiis gurigiisa isku go’doomiyaa labo isbuuc, waxayna taasi la micno noqonaysaa inuu Cavani dhameystirayo muddada karantiilkiisa maalin kaddib marka ay Man United wajahayso Newcastle United.
Cavani waxa uu imaan karaa kulanka kooxdiisa Man United ay ka hortagayso kooxdiisii hore ee PSG tartanka Champions League.